Sidee Cilmi Baadhista Aasaasiga ahi Noocyadeeda ugu beddelaan Hoggaamiyeyaasha Warshadaha | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 5, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Suuqgeyaashu waxay u weecdeen suuq-geynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin, warbaahinta bulshada, xayeysiinta udhaxeysa iyo daraasiin xeelado kale oo suuq-geyn ah si ay xiriir ula yeeshaan dhagaystayaashooda bartilmaameedsanaya Xirfadleyda suuqgeynta waxay si joogto ah u raadinayaan farsamooyin iyo istiraatiijiyado cusub oo ay ku dhisi karaan awoodda heybtooda iyo aqoonsigooda. Hal dariiqo oo gaar ah oo dhowr shirkadood ay ku muujiyaan xaaladdooda sida hogaamiyaasha warshadaha waa iyada oo la abuurayo mid gaar ah cilmi baarista koowaad taasi waa mid labadaba lagu kalsoonaan karo oo waxtar u leh akhristayaashooda.
Qeexitaanka Cilmi-baarista Suuqa Aasaasiga ah: Macluumaadka toos uga yimaada isha –taas waa, macaamiisha mustaqbalka. Adiga ayaa ururin kara macluumaadkan ama shaqaaleyn kara qof kale si uu kuugu ururiyo adiga oo adeegsanaya sahanno, kooxaha xallinta iyo qaabab kale. Qeexitaan Ganacsade
Janna Finch, Tifatiraha Maamulka ee La-talin Software, shirkad cilmi baaris ah oo bixisa dib u eegis bilaash ah oo ku saabsan barnaamijka suuq geynta, dhowaan soo saaray warbixin taasi waxay bixisaa afar tusaale oo ah shirkado isticmaalay cilmi baarista koowaad sida istiraatiijiyad calaamadeyn wax ku ool ah. Waxaan go aansanay inaan la qabanno Finch oo aan aragno macluumaadka dheeriga ah ee ay tahay inay la wadaagto isticmaalka istiraatiijiyaddan. Waa tan waxa ay ahayd inay bixiso:
Sidee cilmi baarista aasaasiga ah uga caawin kartaa dhisida hey'ad sumadeed?
Suuqyayaashu waxay ogyihiin in daabacaadda macluumaadka la wadaagay in ka badan iyo in ka badan aanu ku filnayn in la kordhiyo waxqabadka raadinta ama la horumariyo aqrin soo saartay hagitaan iyo beddelaad Tani maahan wax lagu karsado guusha, mana noqon doonto kala sooc astaantaada ka noocyo kale.
Tayo sare, asalka asalka ah waa hab fiican oo looga kici karo sawaxanka tartamayaashaada iyo baaritaanka aasaasiga ah wuxuu sifiican ugu habboon yahay biilka. Cilmi-baarista aasaasiga ah, markii si habboon loo fuliyo, waxay ku siinaysaa rajadaada waxyaabaha ku jira oo ah mid gaar ah oo aan laga helin meel kale maxaa yeelay way cusub tahay.
Daabacaadda cilmi-baarista aasaasiga ah waxay leedahay faa'iidooyin muhiim ah:
Nuxurka la wadaago: Dadku had iyo jeer waxay raadiyaan waxyaabo cusub oo xiiso leh waxayna iska ilaaliyaan waxyaabaha loo qaybiyey boqollaal jeer oo leh jirooyin yar oo kala duwan. Cilmi-baarista asalka ah waxay leedahay fursad wanaagsan oo xiiso leh oo faa'iido leh, taas oo macnaheedu yahay dadku waxay u badan tahay inay ku soo qoraan, sida oo kale, ku dhaji ama ku qoraan wax ku saabsan.
It wuxuu muujiyaa awoodaada ku saabsan mawduuca: In la sameeyo mashruuc cilmi-baaris aasaasi ah ma aha hawl fudud. Waxay u baahan tahay nin badan saacado iyo u hure. Dadku way garwaaqsan yihiin tan waxayna ogyihiin in haddii shirkaddaadu ay dhab ka tahay inay fuliso mashruuc cilmi-baaris oo weyn, waxaad u badan tahay inaad awood u leedahay mowduuca.
Maamulka dhismaha ayaa sidoo kale leh Saamaynta SEO. Dad badan oo ku kalsoon kalsoonidaada oo ixtiraamaya mawduucaaga, ayaa inbadan oo agabkaaga ah ayaa la wadaagayaa oo lala xiriirinayaa. Mashiinnada raadinta ayaa go'aaminaya in haddii aad ka kooban tahay si xoog leh loo wadaago, markaa waxay u badan tahay inay tahay kheyraad qiimo leh. Haddii Google ay ku aragto isku xirnaanta mawduucaaga, astaantaadu waxay qaadi doontaa awood dheeri ah waxayna bilaabi doontaa inay ka muuqato SERPs ka sii sarreeya dad badan ayaa booqan doona bartaada. Soo-booqdeyaal badan ayaa badanaa macnaheedu yahay beddelaad badan.
Maxay tahay sababta dhismaha sumad awood leh oo internetka muhiim ugu ah ganacsiyada?
Dadku waxay u muuqdaan inay raadsadaan shirkado maxaa yeelay waxay ku kalsoon yihiin sumcaddooda, ama waxay siiyaan macluumaadka ay raadinayaan, ama waxay la kulmeen waayo-aragnimo hore oo togan. Adiga oo dhisaya hay'ad magac leh, waxaad sidoo kale dhiseysaa kalsooni. Markii dadku aaminaan shirkaddaada oo ay kuu arkaan hoggaamiye, waxay aakhirka u horseedi kartaa horseedyo badan iyo dakhli badan.
Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay internetka. Markasta oo sumaddaadu ay awood leedahay, ayay u badan tahay inay si aad ah ugu sarreyn doonto natiijooyinka raadinta. Markay sare u kacdo meheraddaadu bogga natiijooyinka raadinta Google, ayaa si aad ah u muuqan kara sumaddaada, iyo aragtida weyn waxay ka dhigan tahay dakhli badan. Si fudud loo dhigo, qofna weligiis wax kama iibsado degel uusan ka heli karin.
Ma jiraa tusaale nooc summad leh oo si guul leh u hirgeliyey istiraatiijiyaddan suuqgeynta?
Waxaa jira shirkado dhowr ah oo si guul leh u isticmaalay cilmi-baarista aasaasiga ah si ay u dhisaan awoodda ay leeyihiin. Hal shirkad ayaa si gaar ah ugu guuleysatay hirgelinta istiraatiijiyaddan - Moz. Moz waxay awood u laheyd hagaajinta mashiinka raadinta (SEO) muddo ku dhow toban sano. Si kastaba ha noqotee, isku dayga ah in lagu ilaaliyo xaaladdooda hor-u-tag ah ee ilaha SEO, waxay sidoo kale fiiriyaan cilmi-baaris aasaasi ah.
Moz waxay sahamisay in ka badan 120 suuqleyda sare ee SEO ah si ay u ururiyaan ra'yigooda ku saabsan in ka badan 80 qodobo darajooyinka mashiinka raadinta. Moz waxay soo aruurisay xogta iyo waxay soo saartay garaafyo si fudud loo akhriyi karo iyo xog kooban akhrinta iyo wadaagga ugu badan. Go'aanka ay u leexdeen raadinta aasaasiga ah wuxuu ahaa mid aad loogu guuleystey maxaa yeelay waxay siiyeen suuqleyda SEO cilmi baaris waxtar leh oo lagu kalsoonaan karo oo aan cid kale bixin karin. Dadaalkani wuxuu kasbaday ku dhowaad 700 xiriiriye iyo in ka badan 2,000 saamiyada bulshada (iyo tirinta!). Muuqaalka noocan ahi ma aha oo kaliya inuu kordhiyo awoodda sumcaddooda, laakiin sidoo kale wuxuu sii adkeynayaa sumcaddooda inay yihiin il sumcad ku leh macluumaadka SEO iyo hababka ugu fiican.
Talo noocee ah ayaad u haysaa shirkadaha kale ee ka fiirsanaya inay adeegsadaan cilmi-baaris aasaasi ah si ay u dhisaan awoodda astaanta ay leeyihiin?
Fahmaan abuuritaanka cilmi-baaris aasaasi ah oo tayo sare leh waxay qaadataa waqti iyo dadaal badan. Sida mashruuc kasta oo weyn, istiraatiijiyadda iyo qorshayntu waa muhiim. Waa kuwan su'aalo dhawr ah oo ay tahay inaad isweydiiso kahor intaadan bilaabin ururinta xogta:
Maxaan rabaa inaan ogaado?
Sideen ku ururin karaa macluumaadka noocan ah? Weydii naftaada haddii sida ugu wanaagsan ee xogtaan loo ururin karaa ay tahay in la abuuro sahan la wadaagi karo, ama wareysi lala yeesho koox yar oo khubaro ah, ama haddii aad ururin karto xogta adiga oo sameeya fiiro gaar ah.
Sidee natiijooyinka mashruucan faa'iido ugu yeelan doonaan macaamiishayda ama dhagaystayaashayda? Waad mari kartaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo shaqada adag ee uruurinta xogta tayada leh, laakiin haddii aysan waxtar lahayn, xiiso iyo si sahal ah loo wadaagayo, sidee ayey gacan uga geysan doontaa dhismaha maamulkaaga?
Haddii aad wax ka qabato su’aalahan waxaad horayba uga horraysaa kuwa badan oo kula tartamaya.
Weligaa ma isticmaashay cilmi-baaris aasaasi ah si aad u sarreysid awoodda sumaddaada? Fadlan la wadaag sheekadaada ama faallooyinkaaga hoosta.
Tags: Janna FinchmozCilmi-baarista Suuqa Aasaasiga ahcilmi baarista koowaadcilmitalo software
Sidii hore loo sii saadaaliyay, 2013 Iibinta Fasaxa ayaa Moobil Ku Baxay